Vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy tsy voadio vita amin'ny milina sy mpamatsy | Ouzhan
Sora-by vy vy
Ny singa fototra amin'ny vy tsy misy fangarony dia ny karbaona, ny chromium, ny nikela ary ny singa firaka sasany toy ny molibdenum, ny varahina ary ny azota. Ny fizotry ny fikapohana mena dia teknolojia fanodinana tsindry hafanana mandroso miorina amin'ny fametahana mazava tsara sy ny fandroahana mafana. Ny toetra mekanika an'ny faritra dia mihatsara amin'ny fanovana ny fomba fanodinana. Ny fizàrana totohondry mena dia manafana ny banga vy toa ny fizotran'ny fanaovana hosoka marina. Ny famolavolana ny bobongolo, afa-tsy ireo faritra misy tombo-kase mena lehibe, dia mazàna amin'ny fotoana iray no niforona, raha ny tsindry azo antoka kosa mazàna amina tsindry maro.
Ny fizotran'ny totohondry mena dia misy heviny lehibe sy azo ampiharina amin'ny famokarana milina, vokatra enti-miasa isan'andro, fiarovana, faritra aerospace ary fampiharana hafa. Ohatra, ny faritra mekanika maro toy ny motera diesel, traktera, fiara, balafomanga, sns dia tena mety amin'ny famokarana ny doka mena. Amin'izao fotoana izao, ny dingan'ny fikapohana mena dia be mpampiasa amin'ny famokarana indostrian'ny fitaovana isan'andro, toy ny valves isan-karazany, ny fantson-drano, ny voanjo, sns amin'ny fantsom-pantsaka vita amin'ny totohondry mena varahina. Miaraka amin'ny tombony kalitao tsy manam-paharoa, izy io dia nanolo ireo vokatra novokarin'ny casting casting na casting tamin'ny lasa. Ouzhan dia manome serivisy namboarina tamin'ny vy sandoka namboarina ho an'ny mpanjifa sarobidy.
Tombony amin'ny faritra vita amin'ny vy tsy metaly Shanghai Ouzhan
- Mampiasà fitaovana mahazatra amin'ny famokarana, mora apetraka amin'ny famokarana, mety amin'ny orinasa kely sy salantsalany
- Famokarana avo lenta, mety amin'ny famokarana betsaka
- Ny toetra mekanika an'ny faritra nohomboana mena dia tsara
- Ampitomboina ny hakitroky ny vy ary manatsara ny fanoherana ny harafesin'ny ampahany
- Mety amin'ny karazana fanodinana vy miloko na mainty
Fitaovana fanodinana vy vita amin'ny vy mekanika namboarina
Fampiasana Ny valva isan-karazany, fantsona fantsom-boanjo, voanjo, sns amin'ny alàlan'ny fantsom-pitrandrahana an'i Tonghonghong dia nanolo ireo vokatra novokarin'ny casting casting na casting tamin'ny tombony tsara tsy manam-paharoa.
Previous: Foring faritra vy vy
Manaraka: OEM vy vy sandoka faritra mekanika faritra